Springworks inowedzera mazana mashanu emazana emamirioni emamita ehydroponic yekurima girinihausi
Lisbon, Maine - Springworks, iyo hombe uye yekutanga yakasimbiswa organic anhydrous purazi muNew England, nhasi yazivisa hurongwa hwekuwedzera mazana mashanu emazana emamirimita emafirita emagetsi. Iko kukura kukuru kuchaenderera mberi kushandira vatengi hombe veMaine Mapurazi, Whole Foods Supermarket uye Hannaford Su ...
Aurora Cannabis inoronga kuburitsa imwe yemapurazi makuru uye anodhura anoshandiswa kurima cannabis munhoroondo, asi chero mutengi anogona kuve akabatikana kuti awane mari yakawanda kuitira kuti chirongwa ichi chibudirire. Zvinoenderana nezvinhu zvekushambadzira zviripo pachena, Aurora ine investe ...
Sezvo isu tese tichiziva, China inyika ine refu tsika tsika. Kugadzirwa kwekurima kwaendererawo mberi kusimba nekusimudzira tekinoroji. Pakutanga, taishanda mune imwe imba isina kusimba ....
Kune mangani marudzi e greenhouses aripo? Pane nzira mbiri dzekusiyanisa izvi. Nzira yekutanga: Zvinoenderana nekavha yezvinhu kusiyanisa greenhouse. Kwemakore kubvira greenhouse yave ...
Greenhouse Fund Chikumbiro
Tine zvakasiyana siyana zve greenhouse zvinangwa Gadzira michero nemiriwo, kurisa maruva, kusimudza zvidiki zvidiki kana kutsvagisa kwecannab Pane zvinhu zviviri zvekuzadzisa zvinangwa izvi, Mumwe ndiye mutengi uye mumwe ndiye AXgreenhouse nyanzvi Kune vatengi, mari chinhu chakakosha kwazvo Sarudza ...
Maitiro ekuti uwane greenhouse chikwereti
Kana tichironga kuvaka greenhouse, isu tese tinofanirwa kusangana nedambudziko, mari. Kana iwe usingakwanise kunyorera mari kubva kuhurumende kana kuwana chikwereti kubhanga. Unogona kuedza kudzidza zvakawanda nezve Kukura Simba kana Agamerica. Kunyangwe rakakura sei iro zano, iwe unogara uchida chirongwa chekuchengetedza Mutengo wezvinhu ...